नाडाको अध्यक्ष पदका प्रत्यासी थापाले गरे प्यानल घोषणा, को–को छन् ?
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)को आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी ध्रुव थापाले प्यानल घोषणा गरेका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो प्यानल घोषणा गरेका हुन् ।
अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थापाको प्यानलमा नाडाको वर्तमान कार्य समितिका आकाश गोल्छा, निराकार श्रेष्ठ, दिपक अग्रवाल, कपिल शिवाकोटी र शुभाशिष थपलिया छन्।
प्यानलमा अमरज्योति रञ्जित, बि.एन. पाठक, दिपेन्द्रकुमार मिश्र, नवराज भुसाल, नारायणप्रसाद पौडेल (राजन), प्रदिपमान प्रधान, प्रकाश सिग्देल, रिद्धि कार्की, सगुन बि.एस्. कंसाकार, सञ्जयकुमार खेतान छन् ।
नाडाको साधारणसभा तथा निर्वाचन मंसिर २२ र २३ गते हुँदैछ ।
‘चिन्ता लिनुपर्ने गरी अर्थतन्त्र बिग्रिएको छैन, भविष्यको ढोका खुलै छ’
सामान्यतया व्यापारमा कमी आयो र औद्योगिक उत्पादन घट्यो भने आर्थिक मन्दीको लक्षण हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई वर्षसम्म लगातार घट्यो भने पनि मन्दीको संकेत हुन्छ । नेपालमा सन २०२०/०२१ र...
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश नम्बर १ बाट प्रहरीले रु १९ करोड आठ लाख ५९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।प्रदेशका १४ जिल्लाको प्रहरीले छ महिनाको अवधिमा विभिन्न अपराधमा सजाय तथा जरिवाना फैसला भई फरार रहँदै ...
विद्युत प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको प्राधिकरण...